‘प्रेमगीत ३’ को शिर्ष गीत रिलिज, सुहायो प्रदीप र क्रिस्टिनाको केमेस्ट्री ? (भिडियो) « THULOPARDA.COM
निर्माण अगावैदेखि स्टारकास्टका कारण चर्चामा रहेको चलचित्र ‘प्रेमगीत ३’ को दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । महाशिवरात्रीको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको चलचित्रको शिर्ष गीतमा प्रताप दास र प्रविशा अधिकारीको स्वर, राजेश कुमार श्रेष्ठको शब्द र एलिश कार्कीको संगीत छ । गीतमा चलचित्रका चल/अचल दृश्यहरु समावेश छन् । गीतले चलचित्रका दुई प्रमुख पात्र प्रेम र गीतको मनोभाव र प्रेमभाव बोल्छ ।
चलचित्रमा अभिनेता प्रदीप खड्का ‘प्रेम’ र नव-अभिनेत्री क्रिस्टिना गुरुङ ‘गीत’ को भूमिकामा छन् । गीतमा उनीहरुको अंकुराउँदै गरेको प्रेमलाई देखाइएको छ । गीतमा बाल कलाकार अनुभव रेग्मी र सम्वृद्धि शाही ठकुरीलाई पनि देख्न सकिन्छ । चलचित्रमा अनुभव प्रदीपको बाल्यकाल (प्रेम) को भूमिकामा देखिँदैछन् । भने, सम्वृद्धि क्रिस्टिनाको बाल्यकाल (गीत) को भूमिकामा छिन् ।
चलचित्र ‘प्रेमगीत ३’ मा प्रदीप, क्रिस्टिना, अनुभव र सम्वृद्धिका अलावा शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा, सन्तोष सेन, माओत्से गुरुङ, मनिष राउत, पुस्कर कार्की, प्रेम पुरी, लक्ष्मी वर्देवा, योगिशा खत्री, क्रिजन गौतम, जीवन भट्टराईलगायतका कलाकारको पनि अभिनय छ । चलचित्रले डेढ सय वर्ष अगाडिको प्रेमकथा भन्छ । चलचित्रलाई छेतेन गुरुङ र सन्तोष सेनले मिलेर निर्देशन गरेका हुन् ।
कल्याण सिंह र एलिश कार्कीको संगीत रहेको चलचित्रमा राजेश श्रेष्ठले डिओपी, हिमाल केसीले एक्सन, कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी र बनिश शाह तथा भुपेन्द्र अधिकारीले सम्पादन गरेका छन् । छेतेन गुरुङ र मन्दीप गौतमको लेखन रहेको चलचित्र आउँदो चैत २८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । ‘प्रेमगीत ३’ को यसअघि सार्वजनिक भएको ‘हात्ती ढुंगामा’ अहिले चर्चामा छ ।
प्राविधिकलाई सहयोग गर्दा नकरात्मकता फैलाइयो : दीपकराज
लकडाउनका कारण चलचित्रका प्राविधिकहरुलाई आर्थिक संकट परेपछि अहिले चलचित्रकर्मीहरुले सहयोग रकम जुटाइरहेका छन् । कसैले
घरमा हुँदा ऋचा किन लगाउँदिनन् सिन्दूर ?
कोरोना भाइरसबाट बच्न सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि नेपालका अधिकांश जनता घरभित्रै सीमित भएका छन् ।
जन्मदिन विशेष : वर्षाको चुलिँदो व्यस्तता
लकडाउनका कारण घरमै सीमित भएकी अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी सोमवारबाट २७औं वर्षमा लागेकी छन् । उनलाई
प्राविधिकलाई सहयोग गर्न नमिल्ने चलचित्रकर्मी कल्याणकारी कोष !
काठमाण्डौ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले दुई हप्ता लामो लकडाउन घोषणा गरेपछि अरु क्षेत्रझैँ फिल्म
‘बाहुबली’ निर्देशकले गरे अजयको तारिफ
बलिउडका चर्चित अभिनेता अजय देवगनबारे ‘बाहुबली’ फेम्ड निर्देशक एसएस राजमौलीले तारिफ गरेका छन् । अजयलाई